၀၅:၀၁၊ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ နေ့က InternetArchiveBot (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) (ရင်းမြစ် 1 ခုကို ကယ်ဆယ်ပြီး0ခုကို လင့်ခ်သေအဖြစ် စာတွဲပြီးပါပြီ) #IABot (v2.0.8) တည်းဖြတ်သည့်မူ
↑ Solar System Exploration: Jupiter: Facts & Figures။ NASA (May 7, 2008)။
↑ Anonymous (March 1983). "Probe Nephelometer". Galileo Messenger (6). NASA/JPL. Retrieved on February 12, 2007.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြာသပတေးဂြိုဟ်&oldid=644145" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။